အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအပ် Luer သာလျှင်အသုံးပြုမှုဖြတ်ပိုင်း - တရုတ် Suzhou Hengxiang
လုံခြုံရေးဦးထုပ်လုံခြုံမှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးပွါး; အသုံးပြုမှုပြီးနောက်နာကျင်ဖြစ်ခြင်းသူနာပြု၏လက်ကိုရှောင်ရှားနိုင်သည့်, ကိုယ်တိုင်ဆေးထိုးအပ်ကိုဖုံးလွှမ်း; ကိုယ်ကသာ luer စလစ်ဆေးထိုးပိုက်သာရရှိနိုင်၏, ကုန်ပစ္စည်းအဘယ်သူမျှမ .: MDLSN-01
ကိုယ်ကသာ luer စလစ်ဆေးထိုးပိုက်သာရရှိနိုင်၏,
ကုန်ပစ္စည်းအဘယ်သူမျှမ .: MDLSN-01
Sinomed ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံသာအီးလက်မှတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပ် luer စလစ်အသုံးပြုမှုကိုထုတ်လုပ်နိုင်, ဦးဆောင်တရုတ်ဆေးထိုးအပ်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီကလက္ကားစျေးပေါနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
ပူများ Tags: luer စလစ်အစွန်အဖျားပြွတ်, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပ် luer စလစ်အသုံးပြုမှုကိုသာ, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, လက္ကား, စျေးပေါမြင့်အရည်အသွေး, အီးလက်မှတ်
Luer Lock ကိုဆေးထိုးအပ်
ပြွတ် Luer Lock ကို
နိုင်လွန် sutures မဟုတ်တဲ့ကိုစုပ်ယူနိုင်လွန် Suture
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Cap နှင့်အတူအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Syring က
၂၀၁၃ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ၏ကိုယ်စားလှယ်မှ Kumamoto တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်မာကျူရီဆိုင်ရာမီနမာတာကွန်ဗင်းရှင်း။ မီနမာတာကွန်ဗင်းရှင်းအရ ၂၀၂၀ မှစ၍ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောအဖွဲ့များသည် ...